Nezvedu - Zhejiang Baolai Group Co., Ltd.
Zhejiang Baolai Boka Co, Ltd. (Brand: Glazzy) ine hunyanzvi mukugadzira magirazi kweanopfuura makore makumi maviri. Kambani yedu ndeimwe yekambani inotungamira mubhizinesi rezvemaziso muChina, rine dzimbahwe kuChina hombe yekugadzira maziso - Taizhou Linhai.
Tinogona kuburitsa chero mhando yemaziso chete kunze kwekubatana nelenzi, yedu hombe chigadzirwa mutsetse unosanganisira: Sunglasses, Optical furemu, Kuverenga magirazi, Sport magirazi, Acetate magirazi, nezvimwe ... Tiri kubatana neDisney, Walmart, CocaCola, Unilever , Lipton nezvimwewo ..... Tinogona kuratidza ese ehukama fekitori odhita for yako mareferensi kana uchida. Mumakore angangoita masere ekuburitsa ruzivo, isu takavaka rakasimba kukwikwidza uye nyanzvi yekutengesa dhipatimendi, vane hunyanzvi dhizaini timu, inoitisa QC / QA timu.
Tese zvedu tine chinangwa chimwe: kupa zvigadzirwa zvakanakisa kune vese vatengi vedu vakanaka. Nehupamhi hwehupamhi hwepamusoro, zvine musoro zvigadzirwa zvigadzirwa uye zvakagadzirwa dhizaini, isu tinokwikwidza kwakasimba mumusika wedu. Isu tinotarisawo kutonga kwemhando yepamusoro, masevhisi evatengi, panguva yekuendesa uye tinotora izvi sezvinhu zvikuru mukusimudzira kugona kwemakwikwi mumusika wepasi rose. Kugadzira yakanyanya kukosha kune vatengi vedu ndiko kwedu kuramba tichitsvaga. Welcome kushanyira fekitari yedu. Isu tinovimba tinogona kuve nemukana wekuvaka hukama hwebhizinesi newe uye nekumisikidza kubatika kwenguva refu.